Koofiyadaha asalka ah ee gurigaaga ku soo dhaweynaya | Bezzia
Koofiyadaha albaabka ee asalka ah si loogu soo dhoweeyo gurigaaga
Susana godoy | 09/09/2021 14:00 | Qalabka guriga
Faahfaahin kasta oo ka mid ah qurxinta waa la tiriyaa. Sidaa darteed, markaan qurxineyno gurigeena waxaan mar walba isku daynaa inaan siino taabasho gaar ah oo shaqsiyeed. Haddii aad ka mid tahay kuwa doorbida inay doortaan asalka, waxaad nasiib u leedahay kuwan saabuunta albaabka asalka ah. Waxaa had iyo jeer la sheegaa in warqadda daboolku wax badan ka sheegayso gudaha oo kiiskan ma yaraan doono.
Sababtoo ah waxaan u mahadcelinayaa qolyihii albaabka, farxad ayaa qayb ka noqon doonta tallaabada ugu horreysa ee aan qaadno. Waxaad dooran kartaa weedhaha asalka ah, nuqullada filimada ama faahfaahin kale oo badan oo dhulka ka muuqan doona. Waxaad ka mid noqon doontaa deriska ugu qosolka badan dhismaha. Miyaanad u malaynayn?
1 Farriimaha ugu fiican ee soo -booqdayaasha keena albaabka albaabka
2 Doormats si loogu soo dhaweeyo hab asal ah
3 Koofiyadaha albaabka ee gaarka ah
4 Taxanaha aad ugu jeceshahay
Farriimaha ugu fiican ee soo -booqdayaasha keena albaabka albaabka
Had iyo jeer, ama ku dhawaad, booqashada guriga waa la soo dhaweynayaa. Laakiin dabcan, in kasta oo aynaan doonayn inaan u muuqanno kuwo aan caqli -gal ahayn, waxaan ka aamusnaa waxyaabaha aan u malaynayno. Sidaa darteed, haddii aadan aqoon sida loo dhaho ma yimaadaan gacmo madhan, waxba ma aha sida sharadka qaar ka mid ah kuwa albaabka ka shaqeeya oo leh weedho toos ah sida: 'Soo -booqdayaasha sare waxay kiciyaan biirka iyo qashinka hoose.' Waxaa laga yaabaa in waqtiga ay soo galayaan ay u qaataan wax iska caadi ah ama ugu yaraan, dhoolla -caddaynta ayaa soo koobi doonta oo haddii aad jeceshahay, waad iibsan kartaa Halkan isku mid.
Xirmooyinka albaabku waxay tilmaamayaan khamriga, ama inay ka tagaan niyadda xunIn kasta oo aysan ahayn mid maaddi ah, haddana waa wax aan ku mahdinno. Qaar kale xitaa waxay leeyihiin xeerarkii guriga, si aan qofna ula yaabin inuu galo. Sidaa darteed, waxaad durba ogaan doontaa waxaad ka soo horjeeddo. Moodel sida tan Waa hubaal in qof kasta oo ag mara uu la yaabi doono. Markaa waxay la mid tahay asalka, sidaan u jecel nahay.
Doormats si loogu soo dhaweeyo hab asal ah
Ereyga 'soo -dhaweyn' ayaa sidoo kale aad ugu jira inta badan qalabkaan. Laakiin waa run in kuwa aan ka helno Amazon ay u qaadaan si ka sii qaas ah. Sababtoo ah kelmadaha kaliya ayaa laga yaabaa inay xoogaa aan dhammaystirnayn, sidaa darteed, waxaan ku khamaarnaa sameynta tixraacyada filimada sida 'Star Wars' una gudub dhinaca mugdiga leh tan albaab muhiim ah.
Inkasta oo haddii aad jeceshahay muusikada, ma awoodi doontid inaad ilowdo mid ka mid ah Heesaha dhagaxa Isbaanishka sida midkii Miguel Ríos ku heesay waqtigaas. Hagaag hadda, waxaad sidoo kale ku haysan kartaa cagahaaga oo waligaa si fiican uma dhihin fikrad la mid ah tan Halkan waan ku tusaynaa. Had iyo jeer waxaa jiri doona fikrad aad jeceshahay!
Koofiyadaha albaabka ee gaarka ah
Hubaal waad samayn kartaa albaabkaaga u gaar ah hab shaqsiyeed, si qoyska oo dhan hal dhinac loogu matalo. Markaa, waxa ugu fiican ee aad samayn karto waa inaad sharad ku dhigto inaad magacyadaada hoos dhigto mid kasta oo kabaha naqshadda ah sida ay u muuqdaan. Halkan. Haddii aadan carruur lahayn, waxaa laga yaabaa inaad haysato xayawaan rabaayad ah sidoo kale waxay joogi karaan albaabka albaabkaaga, si la mid ah haddii aad keligaa nooshahay ama sida lammaane. Sababtoo ah dhammaan noocyada kala duwan ee qoysaska ayaa matala fikraddaas.
Taxanaha aad ugu jeceshahay
Haddii uu jiro taxane ahaa kii ugu weynaa ee la jeclaa mar walba taasi waa 'Saaxiibo'. Hadda waxay mar kale isugu yimaadeen nooc dokumenti ah oo aad ku raaxaysan karto masraxa. Laakiin waxaa gadaal ka ah dhammaan waxyaabahan soo -jireenka ah ee laba aqal iyo 6 saaxiibbo ah oo noo keenay dhoolla -caddayn ka badan intii la filayay. Majaajilo oo in kasta oo wakhtigu sii socdo ay sii waddo inay leedahay guul weyn, sidaa darteed, ma jirto wax xusuusanaya mid ka mid ah duruufaha ugu jira. Maadaama aan wada ognahay maqaaxiyaha ay ku fadhiyeen kursi gaar ah oo ay ku kulmeen maalintii oo dhan. Hadda waxaad guriga ku soo dhaweyn kartaa 'Central Perk' oo aad haysato Halkan. Taasi fikrad fiican maahan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Qalabka guriga » Koofiyadaha albaabka ee asalka ah si loogu soo dhoweeyo gurigaaga
Qalabka cusub ee Malababa ee dayrta
5 warar suugaaneed ku saabsan kalinimada